Ganacstada Puntland oo Dawo ugu deeqday dadkii ka soo barakacay colaadaha Yemen – Radio Daljir
Ganacstada Puntland oo Dawo ugu deeqday dadkii ka soo barakacay colaadaha Yemen
Maajo 3, 2015 8:48 b 0
Axad, May 03, 2015 (Daljir) — Ganacsatada Reer Puntland ee Magaalada Boosaaso ayaa deeq dhar ah oo gaaraysa hal kuteenar ugu deeqay dadka ka soo qaxay dalka Yemen ee ku sugan Magaalada Boosaaso ee Xarunta Gobalka Bari.
Maamulka Gobolka Bari iyo Maamulka degmada Bosaso ayaa ka qayb galay Munaasabada ay Ganacsatadu ku wareejinayeen deeqada Dharka ah,taasi oo qayb ka ah talaabada dadweynaha reer Puntland ay ku caawinayaan walaalohooda kaso qaxay Yaman.
Konteenarka Dharka ah oo ay la wareegen Guddiga qaabilsan arrimaah Qaxootiga,ayaa gaarsiin doona Qausaska Qaxootiga ah ee ku sugan xeryaha looga sameeyey Magaalada Boosaaso Dharka loogu talagalay.
‘’Shirkadaha iyo Ganacsatada ka qayb qaata arrimaha Bulshada tixgalin gaar ah ayay noo yeelan doonaan,kuwa aan ka qayb qaadana Ilgaara ayaan ku eegaynaa’’Sidaa waxaa yiri Guddoomiyaha Gobolka Bari Cabdismad Galan.
Inkasta oo Dawlada iyo dadweynaha reer Puntland ay soo dhowayn iyo Dib u dajin u sameeyen Soomaalida ka soo qaxay Yaman,hadana wali Dawlada Federaaalka Soomaaliya xil iskama saarin inay gacan siiyaan Qaxootiga Soomaaliyeed ee ku sugan Bosaso.
Dowlada Puntand ayaana dhowr jeer oo hore ku celcelisay in aysan tabar u hayn in qaabisho qaxootiga soomaalida ah ee ka soo baxsanaya colaada ka aloosan dalka yemen ee dagaaladu ay aafeeyeen.
BARNAAMIJKII SAAKA IYO DUNIDA,ISNIIN,04_ [DHAGAYSO]
Wasiirka arimaha dibadda Kenya iyo Madaxweyne Uhuru oo isku Dhacsan